Tsoahy amin'ny ady akaiky amin'i Harbinger | ny sabatrao Androidsis
Manuel Ramirez | | Nohavaozina tamin'ny 24/02/2020 12:43 | Lalao Android, Tutorials
Animus Harbinger dia mitondra antsika amin'izany Skyrim avy ao amin'ny The Elder Scrolls saga, na dia mifantoka amin'ny ady amin'ny olona fahatelo aza. Mazava ho azy, ady iray izay tsy maintsy hahafantaranao ny fampiasana ny sabatrao sy ny fahaizanao amin'ny fotoana mety, hahalalanao ny fomba hampitonena ny kapoka izay ezahan'ny maro andrian'ilay ratsy manapotika ny fanjakana hanome anao.
Un lalao lalao napetraka tonga lafatra hitondra antsika any amin'ny tany feno alahelo sy tafiky ny maty izay mitsangana eo an-tongotsika. Harbinger dia iray amin'ireo lalao manintona ny saina hatramin'ny voalohany, na dia tsy maintsy mivoaka euro vitsivitsy aza ianao aorian'ny nandefasana ny iraka voalohany. Eny, lava be ny nifinao rehefa maniry bebe kokoa ianao.
1 Kerr the Breaker
2 Raiso an-tànana ny sabatrao
3 Haavo avo lenta
Kerr the Breaker
Ny tantara dia miverina amin'ny andro nahatongavan'i Kerr the Breaker tany amin'ny fanjakana tamin'ny fikasana hamaly faty. Nantsoin'ny aloky ny mpanjaka Cadmus nianjera, mangataka anao hanavotra ny zanak'i Qurrehm sy ny fanjakan'ny Cadmeia. Misafotofoto ny fikorontanan-tsaina sy ny fisafotofotoana amin'ny faritra rehetra amin'ny fanjakana izay tsy maintsy arofonao amin'ny fahaizan'ny sabatrao, famaky na marmara.
Amin'izany fomba izany dia mandefa antsika mivantana amin'ny lalao i Harbinger tsy maintsy mahay mifehy tsara ny sabatra isika. Miaraka amin'ny fomba fijerin'ny olona fahatelo, izay nahazatra anay noho ny lalao toy ny PUBG Mobile o Fortnite, ary ny fitehirizana ny halavirana dia miatrika lalao kalitao tsy azo ihodivirana isika ary afaka mamorona impulses instinctive indrindra ananantsika amin'ny maha-izy antsika.
Miaraka amin'izany backstory izany, ny zava-drehetra ao Harbinger dia natao mba diniho ireo iraka izay ho lohalaharana amin'ny lohateny iray manontolo izay novolavolain'i Tenbirds, trano fampiroboroboana ao ambadik'ity vatosoa kely ity izay mipetraka eo an-tongotsika. Araka ny efa nolazainay, tsy maintsy mandoa vola izahay mba hanohizantsika milalao. Ary ny iraka voalohany dia maimaim-poana aorian'ny fisintomana ireo data mihoatra ny 1,3GB.
Raiso an-tànana ny sabatrao
Harbinger dia miteraka a lalao mifantoka amin'ny ady sabatra. Ary io no hahitantsika ny fahavalontsika, lehibe, eny an-dalana, ary manana fahaizana mihoatra ny miharihary amin'ny sabatra, mivoatra tanteraka amin'ny alàlan'ny famelezana tsirairay. Eto ny hetsika tsy mety rehetra dia hametraka anao mivantana handray kapoka mafy, noho izany dia tsy maintsy hizatra amin'ny fahalalana ny fomba hisintonana ara-potoana isika, mba tsy hahita lasibatra io sabatra io ary hamerina ireo hetsika ireo amin'ny tanantsika ankavanana
Hisy ny fotoana afaka mifampitohy amin'ny kapoka maromaro isika mamely ny iray amin'ireo izay nandratra. Ny ady dia ho lasa ampahany malaina indrindra amin'ity lalao ity izay mitondra kalitao be dia be.
Afaka misafidy ny hamita fanentanana isika, misiona faharoa ary Multiplayer amin'ny kinova ho avy, rehefa handeha hividy ilay lalao isika. Azo antoka fa havela ianao maniry bebe kokoa, satria ny iraka voalohany dia tsy inona fa ny prelude ny atao hoe lalao.
Mba ho iray amin'ireo lohateny izay misongadina amin'ny ady, asa lehibe no ilaina amin'ny lafiny teknika. Ao Harbinger no misy ireo ezaka ireo, na dia eo aza ny fihetsiky ny toetra rehefa tsy dia malama tanteraka. Rehefa afaka mamoaka kapoka iray isan-karazany isika, dia amin'izay no ahitantsika ny ampahany mahaliana indrindra amin'ity lohateny ity izay mametraka ny lantom-peony amin'ireo tontolo vita be.
Raha ny ara-teknika dia folo, na eo aza izany hetsika eo an-damosiny izany izay toa hitarika antsika mivantana any amin'ny fahavalo. Tsy mora izany volavolan'ity caliber ity amin'ny telefaona Android, noho izany miaraka amin'ny zava-bitantsika dia afaka ny ho faly mihoatra ny izy isika. Asongadinay indray ny rivo-piainana lehibe tratra sy ireo kapoka izay omen'ny roa tonta sy ny iray hafa.
Harbinger dia lalao fihetsika sabatra mamerina ny lalao manomboka amin'ny telefaona mankany amin'ny ambaratonga hafa. Ankehitriny ianao dia tsy maintsy misaintsaina raha handoa ny vola ilaina mba hahafahana mankafy lalao goavambe amin'ny foto-kevitra sy ny fivoarany.
Spectacular amin'ny sary
Ireo fahavalo tena tsara endrika
Iraka fotsiny amin'ny demo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Animus Harbinger, ny sabatrao hiady amin'ny andian'ilay ratsy amin'ny ady akaiky
Tonga mpangalatra mahay ao amin'ny arcade Hooky Crook